I-Semalt: Kungani ama-plugin we-WordPress aphuluka ohlwini lwe-plugin?
Ama-plugin angama-50,000 we-WordPress atholakalayo ku-plugin ye-plugin ye-WordPress, kodwa ngesikhathi esisodwa ezinye zazo zanyamalala, futhi asiqondi ukuthi kungani kwenzeka. Kunezizathu ezithile ezinhle zokuthi kungani lokhu kwenzeka, kodwa ulwazi alutholakali esidlangalaleni.
U-Ross Barber, isazi esiholela phambili Semalt , utshela ukuthi uma i-plugin yakho ilahlekile ngokuzumayo futhi ufuna ukwazi isizathu ngaphambi kokuqala uphenyo, kufanele uhlole ideshibhodi yakho ye-WordPress ngamathuba alandelayo
1. Isayithi lakho lihlehlisiwe
Ngezinye izikhathi iZwiPress noma amawebhsayithi okubhuloga athathwe ngaphandle kolwazi lwakho. Amathuba wukuthi idatha yakho ibiwe futhi ama-plugin awasebenzi kahle ku-WordPress yakho. Ngicela lapha ngikutshele ukuthi i-WordPress inesibopho sokwenza amasheke ayisisekelo kuwo wonke ama-plugin afakiwe futhi angasusa amakhodi ajowe kumethadatha yakho, kodwa uma inkinga iqhubeka, kufanele uhlole ngokushesha i-WordPress noma uchwepheshe we-IT.
2. Hlola ikhodi ye-Editor ye-ukweba okungenzeka
Esinye isizathu sokuthi i-plugin yakho ye-WordPress ayibonisi ukuthi wena noma omunye umuntu ushintshe ikhodi yomhleli. Ngezinye izikhathi abaduni nabagaxekile basebenzisa ngokunenzuzo amafayela okubulawa kanye namakhodi we-WordPress yakho bese ufaka amakhodi abo enonya kubo. Amathuba ukuthi noma iyiphi yalezi amakhodi iholele ukuthi i-plugin yakho inyamalale kumhlahlandlela we-plugin, kodwa ayikho into ongakhathazeka ngayo. Udinga nje ukuya kusigaba se-Editor bese uhlola ukuthi konke kujwayelekile..Uma ubona amakhodi asolisayo lapha, kufanele ususe ngokushesha ngangokunokwenzeka.
3. Izinkinga ngefayela le-PHP
Njengengxenye yeS Editor, ifayela lakho le-PHP cishe lizohlelwa yi-hacker noma omunye umlawuli. Udinga nje ukuhlola izilungiselelo zale fayela bese uyilungisa, uma kunesidingo. Ngokuvamile, amafayela anjalo ahlelwa abaduni ngenxa yezizathu ezinonya.
4. Qaphela ngamathuluzi wokujola ikhodi
Akufanele neze usebenzise ithuluzi lokufaka injini ngokuzenzakalelayo kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress. Lokhu kungenxa yokuthi lawo amakhodi angenza ezinye noma zonke ama-plugin zinyamalale ohlwini lwemibhalo futhi ungalahlekelwa ngisho nokufinyelela kwakho kuwebhusayithi. Abaqashi ngezinye izikhathi benza ukuhlaselwa kwe-Distributed Denial of Service futhi bajobe amakhodi amaningi amakhosi kusayithi lakho besebenzisa lawo mathuluzi, ngakho-ke sincoma ukuthi uhlale kude nalawo mathuluzi wekhodi futhi uqinisekise ukuvikelwa kwesiza sakho.
5. I-Wordpress ingasusa i-plugin ngokwayo
Ngezinye izikhathi, i-WordPress isusa noma isula i-plugin ngokwayo futhi isizathu sayo asiyazi. Noma kunjalo, ungabheka izilungiselelo zakho zokuphepha uphinde uxhumane nabantu abadala ukuze bayeke i-WordPress ekususeni ama-plugin amaningana esikhathini esizayo. Uma iZwi lakho le-WordPress lixwayise ngezikhathi ezithile ngezinto ezimbalwa futhi awuzange uqaphele, amathuba ukuthi i-plugin yakho izosuswa kusukela ku-directory ngokuzenzakalelayo.
6. Buyekeza i-plugin yakho ukuze uyivimbele ukuthi isusiwe
Ngezinye izikhathi ama-plugin angaphelelwe angavuselelwa ngokuzenzekelayo noma asuswe esihlalweni se-plugin ye-WordPress. Ukuze uvimbele lolu daba, kufanele uvuselele ama-plugin akho njalo futhi ugcine amazinga akho phezulu ngangokunokwenzeka.